ianao eto: Home Tips Ahoana no mifidy ny Monitor?
Eto amin'ity izao tontolo izao, Indrisy, Matetika no isan-karazany ny fomba mba hiarovana ny tenanao sy ny olon-tiana tsy hiady taratra. Fa dia tena sarotra, satria ireo dia tsy hita maso fay sy ny fahatsapana. Ny fanatrehany sy ny asa atao any amin'ny tontolo an-trano dia mety ihany no handrefy ny tokantrano dosimeter.
Ao amin'ny mampidi-doza ny fahasalamana, izay mety hiatrika matetika hitoetra eo amin'ny faritra avo taratra, matahotra hiteny. Koa fa tsara ny hiarovana ny tenanao sy hiarovana ny fianakavianao avy izany.
Dosimeter an-trano - dia somary tsotra fitaovana, Powered by MediaWiki Geiger. Izany mandrefy rivotra lafika taratra, entana, samihafa lohahevitra. Ny tahirin-kevitra no tena marina, fa ny hampiasa azy io ao an-trano dia ampy. koa, izany dia tena tsotra ny mahatakatra ny olona-laika.
Tsara ho nihaino ny, mitsimpona tokantrano dosimeter?
Tsy maintsy ho mazava, Mampiasa ny appliance.
Mariho ny isa sy ny karazana ny Sela Mpandray Hafanana. Tsy miankina amin'ny fitaovana fahatsapana.
Ny vokatra dia tsy maintsy miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny kalitao tsara.
Ny fitaovana dia tokony ho voalamina tsara sy mora, dia azonao atao izany miaraka aminy tsy misy olana.
Available tsy voatery asa, izay tsorina ny fandrefesana.
Mampiasa ny appliance?
Dosimeter an-trano dia tena tsotra ny miasa, dia mora ny mianatra mampiasa.
mihaino, dia azo ampiasaina ho an'ny tanjona toy izany:
Fandrefesana ny afara taratra ao amin'ny efitrano, na eny an-dalana;
fanamarinana fisian'ny singa radiôaktifa amin'ny sakafo;
jereo ny radiôaktifa taratra avy amin'ny zavatra.
alohan'ny, manomboka ny fikarohana, Mila mahatsiaro, fa ny toetra foana ny fototra voajanahary ankehitriny taratra, izay ilaina sady tsy misy fitaka ny fahasalamana. Fa ny mihoatra sarotra dia afaka mitondra vokany.
Handinika ny haavon'ny radioactivity tokantrano mampiasa dosimeter, dia tsy maintsy:
Mialà eo amin'ny fitaovana. Reset ny levitra ny fianarana vaovao, raha ilaina.
Raha te-hijery ny toerana misokatra (eny an-dalana, fitsarana, misy faritra), manaraka, ka dia ny fitaovana tsy maloto. Raha ny fitsapana toerana - ny efitrano, fitondran-tena fikarohana in maromaro ny ny toerana - akaiky ny rindrina, Central, ny valindrihana.
Raha te-hijery ny zavatra na sakafo vokatra, Tazony ny fitaovana ho akaiky araka izay azo atao ho azy. Afaka manatanteraka fandrefesana izany mivantana ao amin'ny magazay, na eny an-tsena, eo anatrehan'ny mety fividianana: fa mafy, ary izany dia tena mety.
Toy izany ny zavatra kely ianao dia ho tena ilaina mpanampy.
Efa niaro ny fahasalamany sy ny olon-tiany.
Vehivavy hihety volo – ny fomba hanaovana safidy?